नगरको विकास र काँग्रेसलाई बलियो बनाउने मेरो पहिलो काम हुनेछः शम्भुराज सिंह ठकुरी
मंगलबार, कात्तिक ९, २०७८ ०८:५६:५२ युनिकोड
मंगलबार, असोज १९, २०७८ Dhading Sanchar
नेपाली कांग्रेस धादिङको आईतबार सम्पन्न अधिवेशनबाट नीलकण्ठ नगरपालिकाका नगर सभापतिमा निर्वाचित हुनुभएका शम्भुराज सिंह ठकुरीसँग रामकुमार थापाले गर्नुभएको कुराकानीको अस्मिता पोख्रेलद्धारा सम्पादित अंशः
१.नगर सभापतिमा निर्वाचित हुनु भएको छ,यसलाई कसरी लिनु हुन्छ ?
मेरो नगरसभापतिको दोस्रो कार्यकाल हो।१३ औँ महाधिवेशनमा निर्वाचनबाटै नगरसभापतिको जिम्मेवारी पाएको थिए। म निर्वाचित भइसकेपछि नीलकण्ठ नगरपालिकामा कांग्रेसको एउटा संगठन बनाएर १४ वडामा ६ वटा वडा कांग्रेसको वडा अध्यक्ष सहित स्थानिय सरकार बनाउन सफल भएको छु ।
मेरो काँधमा अर्को जिम्मेवारी थपिएको छ। म नीलकण्ठ नगरपालिकालाई मजबुद बनाएर अब आउने स्थानिय निकाय १४ वडा मै कांग्रेसलाई बिजयी गराएर स्थानिय तहमा कांग्रेसको बाहुल्यता बनाउँदै विकास र राजनितिक कुरामा पनि अगाडि बढाउने सोच छ ।
२.नेपाली कांग्रेस नीलकण्ठ नगरपालिकालाई अब कसरी अगाडि बढाउनु हुन्छ ?
यो हाम्रो पार्टीको विधान अनुसार आन्तरिक प्रक्रिया हो । सकेसम्म सर्वसम्मत गरेर अगाडि बढ्ने हो । सर्वसम्मत गराउने सर्वसम्मत हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियाबाट त्यसको नेतृत्व चयन गर्ने सामान्य प्रक्रिया हो । यसमा हामीले जो उपविजेता हुन्छ उहाँहरुसँग सँगसँगै हातेमालो गरेर उहाँहरुको सल्लाह सुझाव लिएर अगाडि बढ्दा संगठनमा त्यस्तो समस्या हुँदैन ।
३.पराजित हुने वा उहाँहरुको भावनालाई कसरी समेट्नु हुन्छ? सँगै लान सक्नुहुन्छ?
म सँग प्रतिस्पर्धा गर्ने धुर्व रिजाल ज्युलाई सल्लाहकारमा नियुक्ति गर्छु भनेर घोषणा गरेको छु । हामी सँगसँगै उहाँको सल्लाह लिएर एक अर्काको बिचमा मनमुटाब नराखीकन संगठनलाई सुदृढ गरेर लाने प्रण गरेको छु ।
४.तपाईको अघिल्लो कार्यकालमा के के सम्पन्न गर्न सफल हुनुभयो ?
मेरो सामाजिक पृष्ठभुमि भएको कारणले मैले नगरपालिका भित्र धेरै काम गरेको छु । विद्यालय भवनहरु बनाउने,जिल्ला अस्पताल भित्रका अपरेसन थेटरमा उपकरण राख्ने, एम्बुलेन्स वितरण गर्ने, ४ वटा ठुला खानेपानी योजना सम्पन्न गरे, अहिले ६ वटा योजनाहरु भइरहेको छ ।यो भन्दा पछाडि जिल्ला भरी नै खानेपानी समस्या परेको ठाउँमा काम गर्ने योजना राखेको छु ।
संगठन सुदृढको काममा म नगरसभापति भइसकेपछि ४५ सय अन्य पार्टीका साथीहरुलाई पार्टी प्रवेश गराएर संगठनलाई अगाडि बढाउने काम भइरहेको छ ।
५.अबको स्थानिय निर्वाचनमा कांग्रेसलाई कसरी अगाडि बढाउने या कुन स्थानमा पु¥याउन सक्नु हुन्छ ? कसरी हेर्नु भएको छ ?
अहिले नीलकण्ठमा नेपाली कांग्रेसको स्थानिय सरकार छ। हामीले संघिय संरचना अनुसार १४ वडामा विकासका पुर्वाधारहरु सुरु गरेका छौँ । संघिय संरचना आइसकेपछि धेरै निति नियमका कुराहरु बनिसकेका छन् । कतिपय निति नियमहरु अझै पनि बन्न बाँकी छ। बनिसकेका र बन्न बाँकी निति नियमहरु धेरै भएको कारण अहिले जनतालाई हामीले तुरुन्तै लोकतन्त्रको अनुभुति दिन सकिरहेका छैनौँ हामी अभ्यासमा छौँ ।
अहिले संघिय संरचना अनुसार जति पनि जनप्रतिनिधिहरु हुनुहन्छ उहाँहरु सबै विज्ञ हुनुहन्न । त्यसकारण सबै जनप्रतिनिधिहरु अध्ययन कै शिलशिलामा हुनुहुन्छ । संघिय संरचनाको पहिलो कार्यकाल भएको हुनाले धेरै निति नियमहरु बन्न सकेका छैनन्।जनताका अनुभतिहरु, मनभावनाहरु समायोजन गर्न सक्ने कुराहरु अहिले बाहिर नआएका हुन् ।विकास निमार्णका काम अगाडि बढिसकेको छ।
प्रकाशित मिति: मंगलबार, असोज १९, २०७८
देशभर चिसो बढ्दै २३ मिनेट पहिले
एमालेको पालिका अधिवेशन आज:धादिङको १३ वटै पालिकामा हुने ३६ मिनेट पहिले